Apple waxay qorshaynaysaa qorshihiisii ​​muranka badnaa si ay iPhones -ka gaarka ah loogu sawiro sawirrada sharci -darrada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Xuquuqda Aadanaha » Apple waxay qorshaynaysaa qorshihiisii ​​muranka badnaa si ay iPhones -ka gaarka ah loogu sawiro sawirrada sharci -darrada ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Education • Entertainment • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xitaa shaqaalaha Apple ayaa lagu soo waramayaa inay walaac ka muujiyeen tikniyoolajiyadda ogaanshaha, iyagoo ka walwalsan in loo adeegsan karo ka shaqeynta ilaalinta sirta, inay si sahal ah u garan karto oo calan u saari karto sawirrada qaarkood.
Apple waxay dib u dhigeysaa baaritaannada iPhone -ka.
Baadhitaanka tufaaxa ayaa raadin doona waxyaabaha xadgudubka galmada ee ilmaha.
Dhaqdhaqaaqayaasha iyo kooxaha saxda ah waxay muujiyaan walaacyada ku saabsan faafreebka iyo arrimaha gaarka ah.
Ku dhawaaqista Apple ee dhowaan muranka dhalisay ee ku saabsan qorshayaasha lagu baarayo dhammaan iPhones -ka gaarka ah sawirrada iyo sheekooyinka laga yaabo inay ka kooban yihiin waxyaabaha xadgudubka galmada carruurta (CSAM) ayaa isla markiiba lala kulmay wicitaanno ah inay ka tanaasulaan qorshayaasha kooxaha xuquuqda madaniga, oo ay ku jiraan Ururka Xorriyadda Madaniga Mareykanka (ACLU).
Kadib dhaleeceyntii ka dambeysay ku dhawaaqista, Apple waxay ku dhawaaqday inay "qaadan doonto waqti dheeri ah" bilaha soo socda si ay uga shaqeyso qorshayaasha calanka CSAM, iyada oo ay jiraan walaacyo ka imaanaya dhaqdhaqaaqayaasha iyo kooxaha xuquuqda ee ku saabsan faafreebka iyo arrimaha asturnaanta.
"Iyada oo ku saleysan jawaab -celinta macaamiisha, kooxaha u -doodista, cilmi -baarayaasha iyo kuwa kale, waxaan go'aansannay inaan waqti dheeraad ah qaadanno bilaha soo socda si aan u soo uruurinno fikradaha oo aan u horumarinno ka hor inta aan la siidayn astaamahan badbaadada carruurta ee aadka muhiimka u ah," Apple afhayeenka ayaa sidaa ku sheegay bayaan uu soo saaray maanta.
Teknolojiyadda Apple ayaa iskaan baari doonta iPhone sawirrada iyo wada sheekaysiga CSAM, iyadoo la adeegsanayo barnaamij ay shirkaddu hore u sheegtay inay weli ilaalinayso asturnaanta shaqsiyeed sababta oo ah tikniyoolajiyaddu ma tilmaamayso faahfaahinta guud ee sawirka ama wada sheekaysiga, ama waxay u baahan tahay inay lahaato midkood - in kasta oo dhaleeceeyayaal badani ay ka dhawaajiyeen shakigooda.
Nidaamku wuxuu adeegsadaa keydka tixraaca ama 'hashtags image' si loo aqoonsado waxyaabaha gaarka ah ee la calaamadinayo, in kasta oo khubarada amniga ay ka digeen in farsamada noocaas ah laga yaabo in la maroojiyo, ama sawirro aan waxba galabsan si khaldan loo fasiro.
Xitaa shaqaalaha Apple ayaa lagu soo waramayaa inay walaac ka muujiyeen tikniyoolajiyadda ogaanshaha, iyagoo ka walwalsan in loo adeegsan karo ka shaqeynta ilaalinta sirta, inay si fudud u khaldami karto oo calan u saari karto sawirrada qaarkood - ama xitaa dowladaha qaarkood ay uga faa'iideysan karaan si ay u helaan agab kale. Apple waxay ku adkeysaneysaa inay diidi doonto codsi kasta oo ka yimaada dowladaha si loogu isticmaalo nidaamka wax kasta oo aan ahayn sawirrada xadgudubka carruurta.
"IMessages mar dambe ma siin doonto qarsoodi iyo asturnaanta isticmaaleyaashaas iyada oo loo marayo nidaamka farriinta dhammaadka-dhammaadka ah kaas oo kaliya diraha iyo kuwa qaata loogu talagalay ay heli karaan macluumaadka la diray," akhri warqad ka timid isbahaysiga in ka badan 90 kooxood oo u ololeeya ku socota madaxa Apple Tim Cook isbadallada iman kara.
Waqtiga saxda ah ee dib -u -dhaca hadda lama yaqaan, laakiin nidaamka ogaanshaha cusub ayaa markii hore loogu talagalay in la isticmaalo mar uun sannadkan.